Horudhac: Cadiz vs Barcelona… (Blaugrana oo baadi goobaysa guulo xiriir ah horyaalka La Ligaha Spain) – Gool FM
(Cadiz) 05 Dis 2020. Barcelona ayaa isha ku heysa inay gaaraan guulo isku xiga oo horyaalka La Liga ah marka ay sii wadaan ololahooda 2020-21, iyagoo marti u noqonaya kooxda Cadiz caawa.
Kooxda uu hoggaamiyo Tababare Ronald Koeman ayaa haatan fadhisa kaalinta todobaad ee kala sarreynta horyaalka La Liga, kaddib markii ay uruursadeen kaliya 14-dhibcood sagaalkoodii kulan oo ay ciyaareen intii lagu guda jiray bilowgoodii xilli ciyaareedkan ee niyad-jabka lahaa.
Dhinaca kale kooxda dhowaan u soo dallacday horyaalka La Liga ee Cadiz ayaa fadhisa kaalinta lixaad, iyadoo leh 15-dhibcood.
Cadiz ayaa la filayaa inay ciyaarto saddex daafac ah kulanka ay ka horjeedaan Barcelona, iyadoo Pedro Alcala uu ku soo biirayo Fali iyo Mauro.
Salvi waa inuu taam u noqdaa inuu ku soo bilowdo weerarka kaddib markii uu ka soo kabsaday dhibaato kubka ah, halka Jairo ay tahay inuu garabka kale ka taageero Antony Lozano.
Alvaro Negredo ayaa weli shaki ku jiraa oo dhaawac ahaan kaga maqnaan kara kooxda martida loo yahay, mana u muuqdo inuu ciyaari doono kulankaan, iyadoo keydka uu soo fariisan karo.
Dhinaca kale Samuel Umtiti ayaa weli shaki laga galinayaa kooxda martida ah, maaraama uu qabo dhaawac dhanka jilibka ah, sidaasi darteed Oscar Mingueza waa inuu markale ka soo muuqdo daafaca dhexe ee kooxda Barcelona.
Lionel Messi ayaa la siiyay nasasho kulankii bartamihii isbuucii hore ee Champions League, waana inuu ku soo laabto garoomada, iyadoo Philippe Coutinho sidoo kale la filayo inuu ku soo bilowdo.
Sidoo kale Pedri waa inuu ku soo laabtaa kooxda, iyadoo Ousmane Dembele uu seego kulankan, inkastoo qaab ciyaareed adag uu ku wajahay Ferencvaros.
>- Cadiz ayaa guuldarreysatay inay guuleysato shanteedii kulan ee ugu dambeeyey oo ay garoonkeeda ku ciyaartay horyaalka La Liga.
>- Markii ugu dambeysay oo ay labadaan kooxood kulmaan waxay ahayd sanadkii 2006, natiijada kulankaas ayaana ku soo dhammaaday gar isku mid ah 1-1.
>- Afar ka mid ah guud ahaan tobankii kulan ee ay ciyaareen labada dhinac ayaa ku dhammaaday barbaro.
>- Labada kooxood ayaa shabaqa soo taabtay afar ka mid ah lixdii kulan ee ugu dambeeyay.
>- Blaugrana ayaa baadi goobaysa guulo xiriir ah horyaalka La Ligaha Spain kaddib markii kulankii hore ee horyaalka ay soo garaceen Osasuna.